Adobe Photoshopdia tonian-dahatsary bitmap ho an'ny famoronana sy fanitsiana sary bitmap (tahaka ny sary) noforonin'i Adobe Systems.
Ny famoahana voalohany (1.0) dia navoaka tamin'ny volana Febroary tamin'ny 1990 ho an'ny Mac OS teo ambany fitarihan'ny Adobe Systems. Amin'izao fotoana izao dia misy ny andiany faha-14, misy eo ambanin'ny laboziaCreative Cloud(CC). Tamin'ny voalohany, Photoshop dia noforonin'ireo rahalahy Thomas sy John Knoll, izay niasa tamin'ny 1987. Ny iray amin'ireo hevi-dehibe dia ny famotsorana ny rafitra fiasa Microsoft Windows amin'ny 1996 (version 4.0). Ny fametahana Creative Suite ampiasaina amin'ny dikan-dikan-dikan-dikan-teny vaovao dia mampiseho fa ny Photoshop dia tafiditra ao amin'ny Adobe's Creative Suite, ao anatin'izany ny Adobe Illustrator sy Adobe InDesign. Ny fametrahana ny Creative Cloud, ny endri-tsoratra farany, dia manondro fa ny Photoshop dia tafiditra kokoa amin'ny rahona.
Family PhotoshopAdobe Systems:
Photoshop ho matoanteny
Amin'ny teny Anglisy, dia mbola mahazatra ny tenyPhotoshop a photoshopHanova sary (indrindra ny retouch) amin'ny sary nomerika amin'ny endrika nomerika (na Adobe Photoshop na programa hafa). Izany dia manampy amin'ny hoe Adobe Photoshop dia iray amin'ireo programa malaza indrindra sy ny tontolon'ny matihanina amin'ny famoahana sary sy sary. Na dia izany aza, Adobe dia manohitra io fampitahana io.
Ny dikan-teny vaovao amin'ny Photoshop dia mitondra fampitahana mpampiasa manana fanamafisam-peo, misy rafitra RAW kokoa, sehatra tsara kokoa, manatsara ny pdf ary Adobe Bridge. Ny zava-baovao tena manan-danja iray dia ny antsoina hoe "Smart filters", izay mamela ny fampiasana tsy filaminana amin'ny filaminana sy ny mety hisian'ny fanovana amin'ny manaraka.
A lehibe endriny vaovao CS5 dia Content-Aware Fenoy ho mora retouching sy ny famafana zavatra avy amin'ny sary - Photoshop irery ihany no mahalala ny fomba hanalana ny ampahany amin'ny sary, "miafina" ary manolo izany amin'ny votoaty izay mifanandrify ny sisa amin'ny sary na sary. Mihamitombo haingana, manatsotra, ary manamboatra fanovana maro izay tsy maintsy atao amin'ny lasa. Nihatsara be ny fandehan'ny programa, ary ampiasaina ihany koa ny fahafaha-mavesatry ny herinaratra ho an'ny solosaina amin'ny ordinatera. Afaka mampiasa ny CUDA amin'ny maha-fahefana azy izy, eny fa na dia amin'ny sary maika mila mitaky fotoana be loatra aza.Ny fitaovana sy ny fitaovana fanampiny dia nampidirina amin'ny fangatahan'ny vondrom-piarahamonina.
Photoshop dia nandalo fiovàna goavambe tamin'ny CS6. Raha vao jerena ny vaovao maizina hoditra, izay nametraka ho toy ny toerana misy anao, fa koa ny singa hafa mpampiasa interface tsara no nohavaozina hanaraka ny fitsipika sy ny maoderina manokana matihanina fitakian'ny mpampiasa, izay niantso maharitra kokoa sy mazava fandidiana.
Fanovana ny ankamaroan'ny fa lasa ambany indray ambonin'ny sy Photoshop CS6 raha oharina tamin'ny teo aloha dikan tena mafy ny varatra, indrindra noho ny fanatsarana Mercury Engine, izay ampiasaina ho fitaovana sary ny fampisehoana sy ny fahaiza-manao ny sary karatra.
Ny endri-tsoratra Content-Aware dia nampitomboina tamin'ny fanitarana sy fampivoarana be indrindra, ary ny Content-Aware Patch sy ny Content-Aware Move dia nampidirina. Ny teo aloha fitaovana, Patch, miasa tahaka ny Content-Aware Fenoy avy dikan CS5 fa mamela ireo mpampiasa amin'ny tena fotoana isafidianana ho aiza tany ny sary dia tsy maintsy ho vaovao mameno ny habakabaka niteraka, mamela kokoa mpampiasa fanaraha-maso ny kalitaon'ny vokatry tsy nanaiky lembenana amin'ny hafainganam-pandehan'ny famonoana fanitsiana.
ny fanafohezan-tenyCCMisy fifandraisanaCreative Cloud, Adobe Business model vaovao izay tadiaviny hisolo toeranaCreative Suiteary nampidirina tamin'ny May 2012. Amin'ity modely ity, ny rindrambaiko dia tsy miditra amin'ny vokatra fa amin'ny serivisy, ary noho izany dia manana fomba vaovao amin'ny famatsiam-bola ihany koa - ny mpampiasa dia tsy mandoa ny rindrambaiko fa ny fahafahana miasa amin'izany. Ho an'ny fandoavam-bola isam-bolana, manodidina ny 50 US Dollars dia omena amin'ny fahafahana miditra amin'ireo sariohatra rehetra, anisan'izany 2 GB Cloud Space (miaraka amin'ny safidy hanampiana fanampiny 20 GB). Raha tsy mijanona intsony izy ireo, dia ho azony avy hatrany ny rindrambaiko sy ny asa rehetra voatahiry ao anaty format manan-tompo,izay tsy mifanohitra amin'ny version Suite Creative Suite.Ankoatra izany, dia ho voasakana ny fidirana amin'ny rahona.Io tena zava-dehibe fiovana eo amin'ny Pricing politika Adobe no tena tsara nandray ny mpanana petrabola ao amin'ny orinasa, Adobe mihitsy manolotra azy ho be fanantenana revolisionera fiovana, fa ny maharitra mpampiasa ny miteraka voka fanehoan-kevitra, anisan'izany ny hetsi-panoherana ary ny fanangonan-tsonia manohitra izany fanitsiana, nosoniavin'ny an'aliny olona.Ny filoha lefitry ny Adobe Creative Solutions dia nilaza fa azony ny mpampiasa fa fiovana goavana izany, fa Adobe dia mifantoka amin'ny toro lalana Creative Cloud izay hifantoka sy hampihatra ny zava-baovao rehetra amin'ity modely ity.
Tahirin-drakitra fanontana ny programa
PSD(Rakitra Photoshop) - endrika iray mitahiry ny masony, ny lay, ny mixes, ny lakandrano, ny lalana,
PSB(Photoshop kevitra lehibe endrika) - Ny endrika lehibe natao ho an'ny endrika antontan-taratasy - niakatra ho any 300 000 teboka amin'ny lafiny na mitahiry sy mamela anao antontan-taratasy lehibe kokoa noho ny 2 GB (tsy maintsy afaka amin'ny toe-javatra); voatanisa ao amin'ny Photoshop CS